Samuel Nhoma a Edi Kan 31:1-13
Saul ne ne mma mmarima baasa wuwui (1-13)
31 Ná Filistifo ne Israelfo reko,+ na Israel mmarima guan fii Filistifo no anim, na wɔn mu bebree wuwui wɔ Gilboa+ Bepɔw so. 2 Filistifo no tuu wɔn ani sii Saul ne ne mma so,* na Filistifo no kum Yonatan,+ Abinadab, ne Malki-Sua a wɔyɛ Saul mma.+ 3 Ɔko no mu yɛɛ den maa Saul, na eduu baabi no, agyantofo no huu no, na wɔtow agyan wɔɔ no piraa no paa.+ 4 Ɛnna Saul ka kyerɛɛ ne somfo a okura n’akode no sɛ: “Twe wo sekan fa kum me na momonotofo*+ yi ammɛwɔ me sekan anyɛ me aninyanne.”* Nanso ne somfo no ampɛ sɛ ɔyɛ saa, efisɛ na ehu aka no paa. Enti Saul faa sekan no na ogyaa ne ho kɔwɔɔ so.+ 5 Bere a ne somfo no hui sɛ Saul awu no,+ ɔno nso gyaa ne ho wɔɔ ne sekan so wui. 6 Enti saa da no, Saul, ne mma mmarima baasa, nea okura n’akode, ne mmarima a wɔka ne ho nyinaa wuwui.+ 7 Bere a Israelfo a wɔwɔ asaasetraa no so* ne Yordan mpɔtam hɔ hui sɛ Israel mmarima aguan, na Saul ne ne mma nso awuwu no, woguan fii wɔn nkurow no mu;+ ɛnna Filistifo no bɛtenatenaa hɔ. 8 Ade kyee no, Filistifo no bae sɛ wɔrebeyiyi awufo no ho nneɛma, na wokopuee Saul ne ne mma baasa no so sɛ wɔawuwu gu Gilboa Bepɔw so.+ 9 Ɛnna wotwaa ne ti yiyii n’akotaade,* na wɔsoma kɔɔ Filistifo asaase so baabiara kɔbɔɔ amanneɛ+ wɔ wɔn abosomfi*+ ne ɔmanfo no mu. 10 Afei wɔde n’akotaade no koguu Astoret ahoni fi, na wɔde n’amu kɔsɛn Bet-San+ ɔfasu ho. 11 Bere a nnipa a wɔwɔ Yebes-Gilead+ nyinaa tee nea Filistifo de ayɛ Saul no, 12 akofo no nyinaa sɔre nantew anadwo no nyinaa kɔɔ hɔ, na wokoyii Saul amu ne ne mma no nso amu fii Bet-San ɔfasu no ho, na wɔde wɔn baa Yebes bɛhyewee wɔ hɔ. 13 Na wɔfaa wɔn nnompe+ kosiei wɔ tamarisk dua a ɛwɔ Yebes+ no ase, na wɔyɛɛ akɔnkyen* nnanson.
^ Anaa “bon mu.”